कति चाँडो दृष्टि पुनर्स्थापना? तपाईं चश्मा वा लेंस लगाउने सक्छन्, तर यो समस्या मात्र स्पष्ट समाधान छ। सबै आँखा काल र आँखा मांसपेशिहरु बढ्न र बन्द हुनेछ पनि हुनेछ "कठोर हुनु।" के तपाईं साँच्चै राम्रो हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले प्रदर्शन गर्न आवश्यक आँखा लागि व्यायाम दृष्टि सुधार गर्न।
तपाईं दृष्टि सुधार गर्न अभ्यास गर्दै सुरु गर्नु अघि, तपाईंले नेत्र रोग विशेषज्ञ परामर्श आवश्यक छ। यो अभ्यास संग मान्छे को लागि contraindicated छन् रेटिना detachment, तिनीहरूले समस्या झन् खराब बनाउन सक्छ। जब आँखा बलियो भोल्टेज अप्रत्यक्ष मांसपेशीमा आक्रान्त रेटिना tearing, हुन सक्छ, र फलस्वरूप, दृष्टि वा अन्धो को आंशिक हानि। अर्को contraindication - कुनै पनि आँखा मा सञ्चालन। सर्जरी पछि, तपाईं दृष्टि सुधार गर्न व्यायाम अभ्यास गर्न सक्छन् कम्तिमा छ महिना प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, र त्यसपछि मात्र।
अभ्यास को मुख्य जटिल गर्न अघि बढ्नु अघि, आँखा मांसपेशिहरु आराम गर्न आवश्यक छ। सम्म तिनीहरूले तातो बन्न, एक अर्को मा दल्नु हात को Palms, र त्यसपछि छैन प्रकाश को एक रे तिनीहरूलाई मार्फत भित्र पस्नु गर्दैन, बन्द आँखा लागू: यहाँ कसरी। एकै समयमा टाउको हातमा र पूर्ण तनावमुक्त आधारित छ। व्यायाम बैठे र टेबल मा झुकाव लागि उपयोगी छ। र अब उनीहरूले तिमी आराम र शरीर भर खोलन बाहिर द्वीपसमूह बारेमा पाँच मिनेट बस्न मदत गर्नेछ, राम्रो सम्झनाहरु ल्याउन आवश्यक छ। यो व्यायाम, आँखा को मांसपेशिहरु आराम गर्न मद्दत गर्छ लगभग सबै प्रक्रिया र पुन: को पाठ्यक्रम को आधार छ। तपाईं व्यायाम "20-20-20" जस्तै, एक कम्प्युटर मा काम एक दिन धेरै घण्टा भने: हरेक 20 मिनेट 20 सेकेन्ड को लागि गर्नै पर्छ 20 blinks। यो, आँखा मांसपेशिहरु आराम गर्न आँखा moisten र तिनीहरूलाई mikrootdyh दिन पर्याप्त छ।
एक भनिन्छ व्यायाम, राम्रो कोचिंग आँखा मांसपेशिहरु, को "ग्लास मा मार्क।" आफ्नो आँखा को स्तर मा एक विन्डो मा एउटा सानो राउन्ड चिन्ह समाधान गर्न आवश्यक छ। लेबल को सट्टा, तपाईं एक सरल पेन्सिल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले पहिले नै चश्मा लगाएका छन् भने, तिनीहरूलाई मा व्यायाम गर्छन्। तपाईं विन्डो देखि एक खुट्टा बन्न र एकांतर लेबल र एक ठोस वस्तुमा उदाहरणका लागि, विन्डो मार्फत हेर्न, एक उच्च रूख गर्न आवश्यक छ। यो व्यायाम तीन सात मिनेट देखि समय एक हप्ताको वृद्धि, दुई पटक एक महिना एक दिन भित्र हुनुपर्छ।
त्यहाँ आँखा लागि व्यायाम लागि केही सामान्य सिफारिसहरू हो:
दृष्टि सुधार गर्न अभ्यास लामो समय आवश्यक छैन, तर अक्सर;
बिस्तारै पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या को जटिलता र नम्बर वृद्धि गरी एक सरल व्यायाम सुरु गर्नुपर्छ;
सबै अभ्यास बिस्तारै प्रदर्शन र तनाव बिना छन्, हतार छैन;
प्रत्येक व्यायाम को अन्त मा आखा भ्किमभ्किम गर्नु आवश्यक छ;
त्यहाँ बेचैनी छ भने, यो, प्रयोगले अवरोध गर्न आराम र आँखा मा तनाव कम आवश्यक छ।
रंगीन स्थलहरू सर्कलमा र आँखा, tearing, वा बालुवा, टाउको दुखाइ को एक भावना अगाडि डट्स - यी सबै तपाईं overextended छन् संकेत हो। हामी मुख्य कुरा त्यो सम्झना हुनुपर्छ - को नियमित र क्रमिक प्रशिक्षण, र त्यसपछि व्यायाम भन्दा दृष्टि सुधार प्रभावकारी हुनेछ।
रातो-आँखा कारण। यो सबै अहानिकारक छ?
दिन लेंस फोकस Dailies: विशेषताहरु र सुविधाहरू
संपर्क लेंस Proclear: सुविधाहरू, लाभ र हेरविचार
FreshLook लेन्स। रंग संपर्क लेंस: समीक्षा
लागि आँखा रोगहरु Rossolimo संस्थान। चिकित्सा विज्ञान को आँखा अनुसन्धान संस्थान
के तपाईंको आँखा स्वास्थ्य बारे बताउन?
Lyudmila Pavlyuchenko - एक sniper। जीवनी। सोभियत संघ को नायक। महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध
कसरी आँखा अन्तर्गत बैग को छुटकारा प्राप्त गर्न
प्रो-कपडा कम्पनी मार्फत चिनियाँ रेनकोट कपडे र जैकेट को आपूर्ति मा
व्यञ्जनहरु र विचार: को सुन्ताला जेली
पेरिस मा स्थान डे ला कनकर्ड स्वागत
यस उपकरण र विधिहरू मा पानी पूल मा गर्मी रूपमा
स्मार्टफोन "लेनोभो अनुभूति shot": समीक्षा, समीक्षा, सुविधाहरू (लेनोभो अनुभूति शट)
प्रसारक - ... छ compilers को प्रकार। रूपान्तरण र प्रसारण कार्यक्रम